Gaa ileta Hobbiton na New Zealand | Akụkọ Njem
Gaa na Hobbiton na New Zealand
Susana Garcia | | Auckland, Obodo, New Zealand, Oceania
Ọ bụrụ na ị bụ Fans nke 'Chineke nke Mgbaaka' trilogyN'ezie ị na-echeta obodo Hobbiton nke pụtara na fim ahụ, nke ahụ dabere na nke ahụ dị na akwụkwọ ahụ. 'The Shire' bụ ebe ebe ndị hobbits bi, agbụrụ ahụ sitere na Middle-ụwa nke obere na nnukwu agụụ. Nke bụ eziokwu bụ na ị nwere ike ịga leta ya, mana ọ bụrụ na ịga New Zealand.
Ee, ị nụrụ nke ọma. Ma ọ bụ mgbe ha mechara ihe nkiri ahụ, na obodo hobbiton na ha mepụtara iji gbaa n'èzí nọ na-echekwa, si otú a na-eweta oghere ndị njem nleta nke ka bara uru taa. Nwere ike ịgagharị, lee akwa Hobbit na-atụkwasị, na ọbụlagodi ị aụ mmanya na ụlọ mmanya 'Green Dragon'.
1 Otu Hobbiton Si Nọrọ
2 Otu esi aga Hobbiton
3 Obodo Hobbiton Walk
Otu Hobbiton Si Nọrọ
Na mbido, na ngwụcha ihe nkiri a, ha mere atụmatụ ịkwatu ihe niile. N'ihi ikike nwebisiinka ha kpebiri ịtụfu ụdị na ihe niile metụtara ihe nkiri ahụ, gụnyere ihe nkiri a nke dị n'ugbo dị na obodo Matamata. N'ihi oke mmiri ozuzo, ha kpebiri ịkwụsị mbibi nke saịtị ndị ọzọ maka ọnwa ole na ole ka e mesịrị. Site na oge e mere atụmatụ ya, a tọhapụrụ ihe nkiri ahụ, ndị mmadụ amatalarị ebe ahụ, na-aghọ saịtị njem njem maka ndị fan nke saga. Ugbo ezinụlọ Alexander nwere ala ahụ, wee hụ uru ha ga-erite, ha kpebiri iso New Line Cinema kparịta ụka iji chekwaa obodo hobbit. N'ime afọ abụọ njegharị ahụ malitere, wee rue taa. Dị ka ihe pụrụ iche iji kwuo na e wuru ụlọ 'Green Green' maka ihe nkiri ahụ, mana a gbara ya ọkụ maka 'Nlaghachi nke Eze' ma wughachi ọzọ maka 'The Hobbit'.
Otu esi aga Hobbiton
Iji ruo Hobbiton ọ dị mkpa iji ụgbọ ala ma ọ bụ ụgbọ ala. Kasị nso ị nwere ike ị nweta site n'ụgbọ elu bụ Hamilton, ihe dị ka nkeji nkeji 30 site na Gbuo Na-egbu. Ọtụtụ ndị mmadụ na-esikwa Auckland aga, ebe ọ bụ na ọ dị ihe dị ka elekere abụọ na ọkara site na obodo ahụ. Mgbe anyị rutere n'ugbo Alexander, anyị ga-ahụ Hobbiton naanị site na ịga njem. Enwere ike ime nke a site na ntanetị ma ọ bụ mgbe ị bịarutere, ebe ọ bụ na n'oge dị elu, ha bụ ọkara ọkara. Ha ga-eduru gị na bọs gburugburu ugbo ahụ ihe dị ka nkeji iri, ebe ị na-enwe ọmarịcha mpaghara 'La Comarca'. Mgbe ị bịarutere njem ahụ ga-adịru awa ole na ole, iji nwee ike ịhụ nkuku niile nke obodo hobbit nke ọma.
Obodo Hobbiton Walk
Enwere ọtụtụ ihe ị ga-ahụ n'obodo a, ọ bụkwa na n'oge njem ahụ, ọ bụghị naanị na ị ga-ahụ akụkụ ya niile, mana ị ga-agakwa na-agwa gị ọtụtụ akụkọ na nkọwa nke oge ịse. Nke a bụ akụkụ kachasị mma maka Fans nke trilogy ahụ, n'ihi na ha ga-amata ọtụtụ nkọwa na-atọ ụtọ banyere ihe nkiri kachasị amasị ha na ihe ndị mere n'azụ Mpaghara.
Ebe kachasị ama ama bụ ụlọ Sam, nke pụtara na fim ahụ, yana Bolọ Bilbo Baggins, nke ị ka nwere ike ịhụ ụfọdụ ihe n'ụlọ akụ na mpụga ụlọ ya. Ihe niile doro anya na ọ dị ka mgbe ọ bụla, a ga-egosi na ọ ga-edozi ogige gị. N'ezie, ị nwere ike ịhụ nkata nke akwụkwọ nri a họọrọ ọhụrụ, ma ọ bụ mkpụrụ osisi, n'ihi na hobbits na-enwe mmasị iri nri nke ọma ma bie ndụ dị jụụ n'etiti okike. I nwekwara ike ihu n’ulo n’oku n’anwuru oku
Ọzọ nleta dị mkpa bụ nke akwa nke Gandalf na-abanye na Frodo n'ime ụgbọ ala na ihe nkiri mbụ, akwa mmiri mara mma n'akụkụ igwe nri. Foto ndị dị ebe ahụ dị mkpa. Njegharị ahụ gụnyere ihe ọ drinkụ drinkụ na ụlọ 'The Green Dragon', iji nwee mmetụta dị ka hobbit.
Ọ bụrụ n’ịlelee nkọwa niile, ụlọ ndị dị n’ọdọ mmiri ahụ amaka, ọbụnakwa ha eyiriwo uwe-nbbokwasi edoro m ya nke mere na ọ dị ka hà ka bi n’ebe ahụ, na ha zoro naanị n’ụlọ obere ha ka anyị ghara ịhụ ha. Ha nwekwara ihe ichoro eji eme ememe, dika a ga-eme mmemme ncheta omumu nke Bilbo ozugbo ahu. Enwere achicha achicha ohuru, ulo nwere ezi odi na otutu ndi ozo.
N'oge njem ahụ, nke dị ogologo ma na-enye gị ohere ịhụ ihe niile n'ụzọ zuru ezu, ị nwere ike ịbanye n'otu ụlọ. O bu ihe nwute, n'agbanyeghi na anyi chere na n'ime anyi ga achota ulo hobbit, ulo nile enweghi ihe obula, ha ga - ese foto n'ime ha. Ọzọkwa, ụfọdụ n'ime A na-arụ ụlọ n'ọtụtụ dị ntakịrị, maka ebe ndị ahụ Gandalf na-ele anya karịa ụlọ ahụ, n'ihi ya, anyị nwere ike ịse foto na obere ụlọ hobbit ndị ahụ iji mee ka ọ dịkwuo nkwenye.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » Obodo » Auckland » Gaa na Hobbiton na New Zealand
Agwaetiti anọ dị egwu nke ọdịdị dị iche iche n'ụwa
Shozụ ahịa bụ ihe obi ụtọ na Cambodia